अस्पतालका कर्मचारीको लापरबाहीले ५ जना मानिसलाई एचआईभी संक्रमण - Kantipath.com
अस्पतालका कर्मचारीको लापरबाहीले ५ जना मानिसलाई एचआईभी संक्रमण
अस्पतालका कर्मचारीको लापरबाहीले चीनको एउटा अस्पतालमा पाँच जना मानिसलाई एचआईभी पोजेटिभ संक्रमण भएको छ। ती प्राविधिकले एचआईभी संक्रमित एक व्यक्तिको उपचारमा प्रयोग हुने ट्युब प्रयोगको प्रयोग गर्नाले निरोगी मानिसमा एचआइभी सरेको हो।
पूर्वि चीनको झिजियाङ प्रान्तस्थित हाङझाउ सहरको एक अस्पतालमा उक्त घटना भएको हो। हस्पिटल अफ चाइनिज मेडिसिनको प्रयोगशालमा काम गर्ने प्राविधिकको लापरबाहीले अन्य मानिसमा एचआईभी संक्रमण सरेको हो। ‘दुर्भाग्यवश संक्रमित ट्युबबाट अन्य मानिसमा एचआईभी संक्रमण सरेको छ,’ अस्पतालले जनाएको छ।
लापरबाहीमा संलग्न पाँच जना कर्मचारीलाई अस्पतालले बर्खास्त गरेको छ। अस्पतालले उक्त घटना दुई सतापछि मात्र सार्वजनिक गरेको हो। संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति दिइने अस्पतालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि अस्पतालले बताएको छ।
अस्पताल र कर्मचारीको लापरबाहीप्रति सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका छन्। ‘प्रान्तीय तहको अस्पतालले त सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै भने आम अस्पतालप्रति हामी कसरी विश्वास गर्ने,’ चीनको सामाजिक सञ्जाल विबोका एक प्रयोगकर्ता लेख्छन्।
‘एचआइभीको विषय त उदाङ्गो भयो, अझै कति विषय होलान् जो अस्पतालमा गुपचुप छन्,’ वेबोमा अर्का प्रयोगकर्ताले
Previous Previous post: कति बलियाे छ तपार्इकाे बैवाहीक सम्बन्ध सुताइबाट पत्ता लगाउनुहोस
Next Next post: नेपाल टेलिकमले १६ स्थानमा टेलिफोन टावर जडान गर्ने तयारी
महिलाहरु यसरि सेक्स गर्न चाहान्छन् !
गर्भवती महिलालाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने ?
सेक्सगर्दा महिलालाई कसरी बढी सन्तुष्ट दिन सकिन्छ ? थाहा पईराख्नोस यी कुराले महिलाले आनन्द लिन्छन्
पढ्दा पढ्दै विद्यालय भत्किएपछि
एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन युवतीहरु (भिडियाेसहित)